Home News WAR DEG DEG ah:Madaxweyne Farmajo: “R/Wasaare si Dhakhsa ah iigu keen is...
WAR DEG DEG ah:Madaxweyne Farmajo: “R/Wasaare si Dhakhsa ah iigu keen is Casilaadaada”. Kheyre oo Maraya jidkii Jawaari
War degdeg oo laga helayo xafiiska Mdawxwynaha JFS Mudane Maxamed Cabduulahi Farmajo ayaa sheegaya inuu xalay kulan saacado badan qaatay uu la yeeshay RW Xasan Cali Kheyre uuna u sheegay inuu kheyre u keeno iscasilaadiisii.
Madaxweynaha ayaa Khyre u sheegay inuu siiyey fursad uu wax ku qaban karo dalkana u maanta maarayo meel aad uga liidta meeshii uu joogay markii uu u dhiibayey. Nolashii dadka oo ciriiri gashay , siyasaddii gudaha iyo Ammaankii oo faraha ka baxay iyo siyasaddii arrimaha dibadda oo wajigabax joogto ah lagala kulmayo.
Labada nin runtii aad isugu riiqday waxaana ugu dambeyn lagu soo kala tagay madaxweynaha oo ku adkeystay inuu kheyre u keeno is casilaadiisi sida ugu dhakhsaha badan in Kheyre oo sheegay inuu madaxweynaha ku soo warcelin doono.
Kheyre Saaka waxaa uu kulan dheer la qaatay reerkiisa waxaanu hadda dadaal ugu jiraa inuu dabada la galo muddulloodkii.
MOL oo marwaliba aan aaminsaneyn qaabka qabiil ayaa waxay ka digeysaa in beelaha Xamar aysanku fudaadaanin Xasan kheyre inay la saftaan maadaama aysan jirin cid uu u roon yahay dal iyo dad toona.
Dhinaca kale waxay MW kula talineysaa inaysan arrintaan ku daba dheeraan oo uu si dhakhsa go’aan uga qaato, waayo dalka iyo dadkuba waa tacbaan oo uma adkeysan karaan dagaalkii dheeraa ee lagu qaaday Maxamed Sh Cusman Jawaari. Sidoo kale MW Farmajo waxan kula talineynaa inuu ka fiirsado cidda uu xilka u dhiibayo si looga soo kabto dhibatada xanuunka badan ee dalka haysaa. Waxaan kula talineynaa inuu mucaaridka ka talageliyo cidda uu magacaabayo si haddii wadashaqeyntooda loo heli karo loo helo inta ka dhiman xelligii la doortay. Sida xogta aan ku helaynana waxaa Xamar looga yeeray Fahad Yasiin tan oo caddeyneysa heerka uu gaaray dagaalka labadana nine e Kheyre Farmajo.
Mdaxweyne Maqaar saguaro wax la kala jiitaa waa ka yar yahay dalkaan in mucaaridad loo abuuraa waa ku adag tahay xelligaan hadda la joogo marka dadka ay talada dalka ka go’ada kala tasho sidii loo soo kaban lahaa.
Previous articleQarax qasaaro geestay Oo Lala Eegtay Sargaal Booliis ah
Next articleXOG:In ka badan 70 Shaqaalaha Dowlada Oo Laga Jabsaday iimalada ay isticmaalayen
Al Shabaab oo afduubtay aabo iyo wiil uu dhalay
Madaxda Dowlad Goboleedyada Dalka Oo Maalintii Labaad Shirkooda Uu Soconayo